ESI ESI NA LAPTỌỌPỤ GAA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Nzukọ nke ikesa Internet site na laptọọpụ na Windows 7
Ka kọmputa wee rụọ ọrụ na arụmọrụ kachasị elu na izute ihe nchebe nchebe kachasị ọhụrụ, a na-atụ aro na ị na-etinye nrụnye ọhụrụ na ya mgbe niile. Mgbe ụfọdụ ndị na-emepụta ihe dị iche iche nke OS jikọtara otu mmelite n'ime ngwugwu zuru ezu. Mana ma ọ bụrụ na Windows XP nwere ọtụtụ nchịkọta dị otú ahụ, mgbe ahụ, a tọhapụrụ otu maka G7. Ya mere, ka anyị hụ otu esi etinye Service Pack 1 na Windows 7.
Hụkwa: Nwelite site na Windows XP na Service Pack 3
Ị nwere ike iwunye SP1 dịka site na mwube Ụlọ Ọrụ Nwelitesite n'ibudata faịlụ ahụ echichi site na saịtị Microsoft. Mana tupu ịwụnye, ị ga-achọpụta ma ọ bụrụ na usoro gị chọrọ ya. E kwuwerị, ọ ga-ekwe omume na egosiputa ngwugwu dị mkpa na kọmpụta ahụ.
Pịa "Malite". Na listi nke mepere emepe, pịa aka nri (PKM) na ihe "Kọmputa". Họrọ "Njirimara".
Usoro njirimara usoro window mepee. Ọ bụrụ na nkwụsị "Ntugharị Windows" enwere aha Pack Pack 1, ọ pụtara na ngwugwu a tụlere n'isiokwu a abanyeworị na PC gị. Ọ bụrụ na ederede a na-efu, mgbe ahụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịjụ ajụjụ banyere ịwụnye nwelite dị mkpa. N'otu windo ahụ na - abụghị aha aha "Ụdị usoro" Ị nwere ike ịhụ bit nke os gị. Ozi a ga-adị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ngwugwu site na nbudata ya site na nchọgharị site na saịtị ọrụ.
Ọzọ, anyị ga-ele anya ụzọ dị iche iche iji kwalite usoro ahụ na SP1.
Nzọụkwụ 1: Download faịlụ nwelite
Nke mbụ, tụlee nhọrọ iji wụnye melite site nbudata ngwugwu ahụ site na weebụsaịtị Microsoft.
Download SP1 maka Windows 7 site na saịtị ọrụ
Mepee ihe nchọgharị gị wee soro njikọ n'elu. Pịa bọtịnụ. "Download".
A windo ga-emeghe ebe ị ga-achọ ịhọrọ faịlụ ka ibudata dị ka bit obosara nke os gị. Chọta ozi ahụ, dịka e kwuru n'elu, nwere ike ịnọ na window windo nke kọmputa. Ịkwesịrị ịtọ otu n'ime ihe abụọ kachasị mkpa n'ime listi ahụ. Maka usoro 32-bit, nke a ga-abụ faịlụ a na-akpọ "windows6.1-KB976932-X86.exe", na maka okwu ana-eme ka 64 bits - "windows6.1-KB976932-X64.exe". Mgbe emechara akara, pịa "Na-esote".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ebute gị gaa na saịtị ebe nbudata nwelite dị mkpa ga-amalite n'ime 30 sekọnd. Ọ bụrụ na ọ gaghị amalite n'ihi ihe ọ bụla, pịa na nkọwa. "Pịa ebe a ...". Akwụkwọ ndekọ ebe a ga-ede faịlụ a ebudatara na-egosi na ntọala ihe nchọgharị. Oge nke usoro a ga-adabere na ọsọ nke ịntanetị. Ọ bụrụ na ịnweghị njikọ dị elu, mgbe ahụ ọ ga-ewe ogologo oge, ebe ọ bụ na ngwugwu ahụ dị oke.
Mgbe nbudata zuru ezu, meghee "Explorer" ma gaa na ndekọ ebe e debere ihe a ebudatara. Na ịpalite faịlụ ọ bụla, pịa bọtịnụ aka-ekpe aka ya ugboro abụọ.
Igwe nhazi ahụ ga-apụta, ebe a ga-enwe ịdọ aka ná ntị na a ghaghị imechi mmemme na akwụkwọ niile iji zere nkwụsị data, ebe usoro nhazi ahụ ga-amalitegharịa kọmputa ahụ. Soro ndụmọdụ a ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma pịa "Na-esote".
Mgbe nke ahụ gasị, onye ntinye ga-akwadebe kọmputa iji malite itinye ngwugwu ahụ. Ọ dị mkpa ka ichere.
Mgbe ahụ, windo ga-emeghe, ebe ịdọ aka ná ntị ga-egosiputa ọzọ banyere mkpa ọ dị imechi usoro ihe omume niile. Ọ bụrụ na i meela nke a, pịa "Wụnye".
Nke a ga-edozi ọrụ mkpọsa. Mgbe kọmputa ahụ malitegharịrị na-akpaghị aka, nke ga-eme ozugbo n'oge nrụnye ahụ, ọ ga-amalite na mmelite ahụ arụnyere.
I nwekwara ike itinye SP1 n'iji "Iwu iwu". Mana maka nke a, ị ga-ebu ụzọ budata faịlụ ntinye ya, dị ka akọwara na usoro mbụ, ma tinye ya na otu n'ime ndekọ aha na diski ike gị. Usoro a dị mma n'ihi na ọ na-enye gị ohere ịwụnye na paragraf ndị a kapịrị ọnụ.
Pịa "Malite" ma gaa n'ihu "Mmemme niile".
Gaa na ndekọ a na-akpọ "Ụdị".
Chọta ihe na nchekwa ahụ "Iwu Iwu". Pịa ya PKM ma họrọ usoro mmalite ya na ikike nchịkwa na listi egosipụta.
Ga-emeghe "Iwu Iwu". Iji malite nrụnye, ịkwesịrị idebanye adreesị zuru ezu nke faịlụ installer wee pịa bọtịnụ ahụ. Tinye. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị tinyere faịlụ na ndekọ mgbọrọgwụ nke disk D, mgbe ahụ maka usoro 32-bit, tinye iwu:
Maka usoro 64-bit, iwu ahụ ga-adị ka nke a:
Mgbe ị banyere otu n'ime iwu ndị a, windo melite ngwugwu melite anyị maara site na usoro mbụ ga-emeghe. A ghaghị ịrụ ọrụ ọ bụla ọzọ dịka algorithm ugbua kọwara n'elu.
Ma malite na "Iwu Iwu" Ọ na-adọrọ mmasị na mgbe ị na-eji àgwà ndị ọzọ, ị nwere ike ịtọ ọnọdụ dị iche iche maka mmegbu usoro:
/ jụụ - Mwepụta usoro "ọgbachi". Mgbe ị na-abanye nke a, a ga-eme ka echichi ahụ mepee n'emegheebe ọ bụla mkparịta ụka, ma e wezụga maka windo, nke na-akọ na ọdịda ma ọ bụ ihe ịga nke ọma nke usoro ahụ mgbe ọ rụchara;
/ nodialog - oke oke a machibidoro ụdị igbe dị na njedebe nke usoro ahụ, nke ọ ga-ebu ọkwa banyere ọdịda ma ọ bụ ihe ịga nke ọma;
/ norestart - nhọrọ a na - egbochi PC ịmalitegharịa na akpaghị aka mgbe ọ wụnye ngwugwu ahụ, ọbụlagodi ma ọ dị mkpa. N'okwu a, iji mechaa nwụnye, ị ga-achọ iji aka gị Malitegharịa ekwentị.
Azu ndepụta zuru oke nke eji eme ihe mgbe ị na-arụ ọrụ na SP1 installer nwere ike ịhụ site na ịtinye àgwà na isi iwu. / enyemaka.
Ihe Ọmụmụ: Ịmalite "Line Line" na Windows 7
Nzọụkwụ 3: Ụlọ Ọrụ Nwelite
Ịnwekwara ike ịwụnye SP1 site na usoro usoro ihe omume iji wụnye mmelite na Windows - Ụlọ Ọrụ Nwelite. Ọ bụrụ na a kwalitere melite akpaka na PC, mgbe ahụ na nke a, na enweghị SP1, usoro dị na igbe ahụ n'onwe ya ga-enye gị ịrụ ọrụ ahụ. Mgbe ahụ ọ dị mkpa ka ị soro ntuziaka ndị dị na egosi. Ọ bụrụ na melite akpaka nwere nkwarụ, ị ga-eme ụfọdụ njikwa ndị ọzọ.
Ihe Ọmụmụ: Ịnabata mmelite akpaka na Windows 7
Mepee ngalaba "System na Nchebe".
Ọzọ, gaa "Ụlọ Ọrụ Nwelite ...".
I nwekwara ike mepee ngwá ọrụ a site na windo Gbaa ọsọ. Pịa Nweta + R ma tinye na akara mepere:
Ọzọ, pịa "OK".
N'akụkụ aka ekpe nke interface ahụ meghere, pịa "Chọọnụ maka mmelite".
Mee ka ọchụchọ maka mmelite.
Mgbe e mechara, pịa "Wụnye Nwelite".
Usoro nhazi amalite, mgbe nke a gasịrị, ọ ga-adị mkpa iji regharịa PC.
Ntị! Iji wụnye SP1, ị ga-enwerịrị otu setịpụ mmelite arụnyere ugbu a. Ya mere, ọ bụrụ na ha anọghị na kọmputa gị, mgbe ahụ, usoro ahụ a kọwara n'elu maka ịchọta na ịwụnye mmelite ga-eme ọtụtụ ugboro ruo mgbe ebiri ihe niile dị mkpa.
Ihe Ọmụmụ: Ntuziaka nwelite nke ntanetị na Windows 7
Site n'isiokwu a, o doro anya na arụ ọrụ Pack 1 nwere ike ịwụnye na Windows 7 dịka site na nwube Ụlọ Ọrụ Nwelite, na nbudata ngwugwu ahụ site na saịtị ahụ. Jiri nke "Ụlọ Ọrụ Mmelite" ọ na-adaba adaba, ma na ụfọdụ ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ. Mgbe ahụ ọ dị mkpa ibudata mmelite ahụ site na weebụsaịtị weebụ Microsoft. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịnweta nwụnye "Iwu iwu" ya na ihe enyere.